तपाईं को लागी seuui स्वर्ग प्रमोदवना को होटल
Suui एक आश्चर्यजनक सुन्दर र सबैभन्दा ठूलो टापु को चैम्पन Carripulug को सबैभन्दा ठूलो टापु हो। प्रकृति यहाँ सबै विविधता र उष्णकटिबन्ध लिन को लागी एक व्यक्ति द्वारा यात्रा छैन को लागी प्रस्तुत गरिएको छ। पर्यटन स्थिर हुँदैन, र थाईल्यान्डको यात्रीहरूको चासो बढेको छैन। पोष्टको सपना यस अविश्वसनीय ठाउँमा तपाईंको पारिवारिक छुट्टी राख्न योजना गर्दैछ। यद्यपि यस दिशाको बजेट, अवश्य पनि, तपाईंले कल गर्नुहुने छैन।
Suthui राम्रो मोतील झरना, निलो लागुन, सेतो बालुवा र रातो कोरहरु, Suptument को एक सानो मौसम) र परोपकारी कोमल मुस्कान स्थानीय बासिन्दाहरु। थाइल्याण्डमा, तिनीहरू बच्चाहरूलाई धेरै माया गर्छन्।
एक वर्ष पुरानो बच्चाहरु र वृद्धहरूको बरु जटिल प्रश्न संग छुट्टी मा आराम गर्न को लागी एक ठाउँ छनौट गर्न को लागी एक स्थान। म पनि प्रशस्त प्रभावहरू, र रहस्यमय देशहरूको सूचना टाना छविहरू पनि मन पराउँछु, तर एकै समयमा सबै आवश्यक आधुनिक सुविधाहरू सहभागी भएका छन्। समुराईमा, यी सबै "एक बोतलमा" छन्, किनकि यस टापुमा, फीप र आमाको समीक्षाको लागि न्याय गर्दैछ।
स्थानीय पसलहरूले बच्चाहरूको उत्पादनहरू कम-लागत डायपर (थाई, जापानी, जापानी, शर्महरू, शर्टहरू र सराफानहरू भन्दा बढी सस्तोमा प्रस्ताव गर्दछ - मातृभूमि। प्रमुख मार्केटिंग टेस्को कमसमा, ठूलो सी, कपडा विशाल र बच्चाहरूको आनन्दका साथ, विषालु रंगको बलको साथ घुमाइन्छ, जहाजमा सवारहरू केबल ट्र्याकहरू।
<< p> हामी तपाईंलाई रातको उडानलाई रुचाउँदछौं, त्यसैले बच्चाहरू शान्त हुनेछन्। यो उच्च-गुणवत्ता एयरलाइन्समा तपाईंको छनौट रोक्न पनि उचित छ, तब सबै कुरा राम्ररी जानु पर्छ।
फल र पोषण समस्याहरूको साथ हुनु हुँदैन। अर्को फुर्सद संगठन, र टापुको आवश्यकता पर्दछ त्यहाँ तपाई बच्चाहरूलाई प्रस्ताव गर्नुहुन्छ।
यहाँ जताततै होटेलको छनौटको साथ यो अनुमान गर्न गाह्रो छ, धेरै जसो खुला हात र आतिथ्यको साथ तयार छन्। तर हामी अझै पनि तिनीहरूका घरपालुवा जनावरहरू मिलाउन चाहन्छौं, जुन सम्भवतः बाँकीको बारेमा मात्र सकरात्मक सम्झनाहरू छोड्ने छ।
होटलहरू प्रशान्त महासागरमा समुद्री तटमा समुद्री किनारमा, पर्यटकहरूको मनपर्ने ठाउँमा। यो राज्यको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो टापु हो, धेरैले आफ्नो सौन्दर्यको बारेमा सुनेका छन्। छुट्टीका लागि मुख्य समस्या होटेलको छनौट हो। व्यक्तिहरू त्यस्तो स्थान खोज्न खोज्छन् जहाँ त्यहाँ राम्रो सेवा, आरामदायी ठाउँ र पर्याप्त मूल्य हुनेछ। त्यहाँ होटलहरू छन् जसले उनीहरूको ध्यान दिनुपर्दछ।
Subui होटेल एक समुद्री किनारको लागि एक समुद्री किनारको लागि होटल। पाँच-स्टार जटिलसँग सबै सुविधाहरूको साथ आरामदायक कोठाहरू (मात्र 74 74) छन्। ऊ प्रतिबन्धन बंगेको शहरमा अवस्थित छ। होटलको हाइलाइट प्रत्येक कोठामा पौडी खेल्ने पोखरी हो। प्रत्येक पाहुनाले सियामेज बेको प्रशंसा गर्न सक्दछ। कोठाबाट बाहिर आउँदा विश्राम स्वर्ग प्रमोदवण बगैंचामा प्रवेश गर्दछ, जहाँ तपाईं स्कोर्को घामबाट आराम गर्न सक्नुहुन्छ। होटलको बिचमा जानको लागि, तपाईं केवल ढलान तल जान आवश्यक छ।
<< p> प्रत्येक कोठा सुसज्जित छ ताकि यसमा आराम गर्नु साँच्चिकै शाही छ। थप रूपमा, यहाँ तपाईं स्पामा आराम गर्न सक्नुहुनेछ, रेस्टुरेन्ट थाई र युरोपियन धोखा, पट्टीमा पेय, वा जिममा जानुहोस्। यदि तपाईं जनावरहरूसँगै आराम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई यहाँ अस्वीकार गरिने छैन।
"प्रकृति मनपर्यो, राम्रो समुद्र तट, अद्भुत भिलाहरू, सहयोगी कर्मचारीहरू, सौन्दर्य र आराम। विशेष गरी नरिवल स्नान मनपर्यो। पाहुनाहरूको मनोवृत्ति धेरै सम्मानित हुन्छ, सँधै उद्धारमा आउनुहोस्। मलाई सबै कुरा मनपर्यो, यो शब्दहरू व्यक्त गर्न असम्भव छ। "
ईश्वरीय विश्रामका लागि उत्तम स्थान। होटल लामा समुद्रबाट तटमा अवस्थित छ। परिवार वा रोमान्टिक यात्रा आराम गर्न को लागी उत्कृष्ट। सुन्दर र विशाल भिल्लाहरू, रेस्टुरेन्टहरू, बार, जैलेजरी, सारशियम। यो सबै यहाँ फेला पार्न सकिन्छ जुन यहाँ फेला पार्न सकिन्छ।
लेनल प्लेटहरू खैरो र बीज रंगहरूमा। डिजाइन शैली - शाही लक्जरीको तत्वहरूको साथ परम्परागत थाई। प्रत्येक भिलामा यसको आफ्नै खाना क्षेत्र, आधुनिक टिभी र एक मिनाबन हुन्छ। एक विशिष्ट सुविधा प्रत्येक गाउँ नजिकै "व्यक्तिगत पूल" को उपस्थिति हो।
कोठा दर मा एक प्रशंसाको खाजा र दैनिक सफाई सामेल छ। एक व्यक्ति बीच एक व्यक्ति विशाल र सफा छ, खेल को लागी राम्रो उपयुक्त छ। यहाँको मूल्य निर्धारण नीति एकदम प्रजातान्त्रिक छ, एक कोठा बुक गर्नु भनेको पहिले नै राम्रो हुन्छ, किनकि उनीहरूलाई चाँडै राखिएको हुनेछ। कोठाको लागत बर्षको समयमा प्रभावित हुन्छ। महिनामा निर्भर गर्दै, मूल्य बढ्न, वा पतन हुन सक्छ।
"यो रोयल छुट्टीको लागि एक ठाउँ हो। सबै कुरा छ, तर किन छैन, तपाईं स्टाफको लागि सोध्न सक्नुहुन्छ। हामीले एक विवाहित जोडीलाई विश्राम गर्यौं, हामीले ठीक महसुस गर्यौं। खैर, खुशीसाथ नि: शुल्क बेलुकाको रूपमा स्टाफबाट आश्चर्यचकित खुशी खुशी र फूल र मैनबत्तीहरूको साथ कोठा सजावटमा। "
Sumui होल्प होटेलको बिचमा एक रोमान्टिक दम्पती, वा हल्ला कम्पनीलाई आराम गर्नको लागि मन्करार्ड स्थानको समुद्र तटमा होटल। कम्प्लेक्सभरि, यसले नि: शुल्क वाई-फाइक्स समात्छ। यहाँ तपाईलाई बिभिन्न तहको कोठाहरू प्रदान गरिनेछ (केवल 12 125 कोठा): मानक, सूट, साथै आरामदायक भिल्लाहरू।
उच्च-लागत कोठाहरूमा एयर सर्त, टेलिभिजन, बाथरूम, मिनी बार छ। सबै आगन्तुकहरु रेस्टुरेन्ट, बार हेर्न सक्छन्, साथै फिटनेस वर्ग मा जान। पूर्ण सान्त्वनाका लागि, तपाईं एयरपोर्टबाट स्थानान्तरण सेवा अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ (छुट्टै लागतको लागि)। होटेलको पौडी खेल्ने पोखरी, मनोरन्जन क्षेत्रहरू र अधिक छ। राम्रो र शान्त आराम को लागी सबै भन्दा राम्रो ठाउँ। मुख्य फाइदा मूल्य हो।
"ब्रेकफास्ट ++ को लागि! होटलमा रेस्टुरेन्ट एकदम योग्य छ! कोठामा ओछ्यान उत्तम सहज छ! डिसेम्बर मा समुद्र चुपचाप छ, छालहरू बिना, समुद्रमा उत्तम प्रवेशद्वार। होटल पूर्ण रूपमा नयाँ, राम्रो कोठा हो। सेवा योग्य सेवा! होटलमा बसोबास गर्ने बेलामा दाँत गर्ने दाखमद्यको गिलास दाँत जुन तपाईंलाई 1 15 घण्टा पछि आवश्यक थियो, म सिफारिस गर्दछु। "
Subui होटल BATAJAZEWED TA ताराहरूमा र पूर्ण रूपमा यसलाई पूर्ण रूपमा औचित्य। उहाँ महको किनारमा हुनुहुन्छ - हामी। यहाँ तपाईंलाई is1 कोठाबाट छनौट गर्न प्रस्ताव गरिनेछ: सूट, मानक, भिला। तिनीहरू सबैले उच्च-गुणवत्ता र आरामदायी आरामको लागि आवश्यक सबै चीजको साथ सुसज्जित छन्: वातानुकूलन, टेलिभिजन, मिसिलोज, बाथसवारहरू, नुहाउने र स्नान।
धेरै पर्यटकहरु जो समुउ टापुमा भ्रमण गर्ने योजना बनाइरहेका छन्, "छनौट गर्न समुउमा के होटल के हो?"। यस लेखमा हामी तपाईंलाई बताउँछौं समुन्द्र बिभिन्न कोटिहरूको होटलहरू फरक छन्, साथै धेरै पर्यटक समीक्षाको आधारमा समुउमा उत्तम होटलहरूलाई फोन गर्नुहोस्।